မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော COVID-19 တတိယလှိုင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုက်နာရန်အချက်များကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်တို့အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း အပိုင်း(၁) ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 16K Share – 2430
Tin Khine says:
2021-06-30 at 9:17 PM
Dr khin maung lwin
War War Lin Maung says:
2021-06-30 at 9:34 PM
2021-06-30 at 9:42 PM
Sayar Zaw Wai Soe is the best choice in executive of any plans. Having him as cabinet member in NUG government is fully grantee of our success in spring revolution.
ဆရာကြီး Dr ဇော်ဝေစိုး ကို လေးစားလွန်းလို့ ဦးညွှတ်ပါ၏
Hone Saellette says:
2021-06-30 at 9:47 PM
Be safe all our leaders and Myanmar people 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
2021-06-30 at 10:15 PM
Ni Ni Maung says:
2021-06-30 at 10:18 PM
အားရတယ် ဆရာ၊ မှန်ပါတယ်
ကုပေးနေတဲ့ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းက ဆရာ/မ​တွေကို.လိုက်ဖမ်း​ ပိတ်​နေတာ​ တွေဟာ
Volunteers တွေ​ အရှိသလောက်ပါဘဲ
Covid ကို​ ကုသတဲ့အခါ volunteers တွေ
မျက်စိထည်း​ covid မှာ​ အသက်ပေး​ကူညီ ဲ့တဲ့​ လိုင်သာယာ​ volunteer တစ်ယောက်
Covid နဲ့မသေဘဲ.​သူတို့​ပစ်သ က်လို့ သေသွားခဲ့ပါပြီ 😢
ပြည်သူတွေက သူတို့ကို ယုံကြည်မှုမဲ့သွားတာ ကိုယ့်အတွက်ပြောတာတောင်မှ သိပ်ပြီးတော့ မယုံချင်တော့တာ ဒီကောင်တွေ ဘာပြောပြော မယုံဘူးကွာ လက်မခံဘူးကွာ လို့ အဲသလို စိတ်တွေ ဖြစ်သွားကြတာပါ
ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ဒီ COVID နဲ့ပတ်သက်ရင် စေတနာအပြည့်နဲ့အားသွန်ခွန်စိုက် ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်ပေးခဲ့တယ် ၊ဒါ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ စေတနာ ပညာ လုံ့လစိုက်ထားသမျှကို မင်းအောင်လှိုင်ဖြတ်စီးလိုက်တဲ့အပေါ် ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်ခဲ့လို့ ဆေးပညာသည်စစ်စစ်ဘဝကနေ နိုင်ငံရေးလောကထဲကိုရောက်လာခဲ့ရတာပါ ၊ ဆရာကြီးရဲ့စေတနာတွေကို ပြည်သူကသိရှိနားလည်လို့ ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် ဆရာကြီးရဲ့စကားတွေကိုအမြဲလေးစားလိုက်နာနေပါတယ် ၊ဆရာကြီးအန္တရာယ်ကင်း ကျန်းမာမှ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ ချမ်းသာရာရမှာမလို့ ဆရာကြီး အသက်ရှည် ကျန်းမာအောင် နေထိုင်ပေးပါခင်ဗျာ🙏🙏🙏
2021-06-30 at 10:42 PM
ဆရာကြီး တို့ကို လေးစားပြီးရင် ပိုပို လေးစားရပါတယ်ရှင့် အရေးတော်ပုံ အောင်ကိုအောင်ရမည်💪💪💪ထားပါတယ်ရှင့်
Myomyint Min says:
မ၊အ၊လ INTENTIONALLY open all the school in Burma…
because he knew it already…
ကျောင်း ဖွင့် ရင် covid ရော ဂါ ကူး မယ်….. ကူး ရရင် ရောဂါ မိသားစုကိုပြန့်မယ်. ပြန့် ရင် တပြည် လုံး ဂန့် မယ်….. ဂန့် ရင် စစ်တတ်အုတ်ချုပ်ရ သက်သာမယ်…
စစ်တတ်က ကျောင်း သား တွေ ကို အရန်း မုန်း တား… ကျောင်း သား က လဲး စစ်တတ် ကို အရန်း မုန်း တာ….
တတစ် စား လို့ ချီးတုံး မှန်း သိရင် ဆက် မ စား ပါ နဲ့….
ဒီစစ် အစိုး ရ တိုင်း ပြည် အ တွက် အလွန်ဆိုး တဲ့…. ဆိုး ကြိုး ဘဲး ပေး တာ နှစ် ပေါင်း ၆၀ နီး ပါး ရှိ ပြီ…….
မင်းအောင်လှိုင်သာ TVမှာထွက်ပြောကြည့်ပါလား အဲ့ဒီ TV ရိုက်ခွဲခံရမှာ အဲ့ဒီစကားသဘောကျလွန်းလို့ပါဆရာ စိတ်ချပါဆရာ ကျနော်တို့ကလည်းရိုက်ခွဲမိမှာစိုးလို့ ရောင်လို့တောင်အဲ့ဒီလိုင်းဖွင့်မကြည့်ပါဘူး။
Swe Htun Khin says:
Thet Lin Aung says:
အခြေခံ ကာကွယ်ရေး Mask ဈေးတွေတက်နေတယ် ၁၀၀၀ mmkကနေ ခုရက်အတွင်း 5000mmk ဖြစ်
ဗမာပြည်လို့မသုံးဘဲ မြန်မာပြည်လို့ သုံးရင် ပို​ကောင်းပါမယ်ခင်ဗျ။
Dennis Aung says:
ဟုတ်တယ်။ TV ကိုရိုက်ခွဲမိမှာ။
2021-07-01 at 12:13 PM
ဆရာကြီး များ နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူအကျိူးအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင် အောင်မြင့်နိုင်ပါစေ
ဟု ဆုတောင်းဆန္ဒ ပြုလျှက်
တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာခံပြီး စွန့်စားရဲတဲ့ ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘေးကင်းကျနိးမာကြပါစေ။ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှဲစွာ လေးစား ကြည်ညိုရပါတယ်။ မျှော်မှနိးတဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်ဆီ အရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ.. 🙏 🙏🙏
#အာဏာရူး မိစ္ဆာ မအလနဲ့ အပေါင်းအပါများ မုချ ကျရှုံး ကျဆုံးပါစေ စကားတည်စေ မြဲစေ သစ္စာစူးစေ
2021-07-01 at 6:43 PM
Nwe Yi says:
2021-07-01 at 7:27 PM
ေကျး ဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးတို အသိပညာ မေတ္တာ စေတနာ​ေကြာင်..ပြည်သူများCovid-19 မှ လွတ် မြောက်ကြမှာပါ
ဆရာကြီးတို့ မျှော် မှန်းတဲ့.နိုင်ငံ တော်လစ်ဆီ အ ရောက် လှမ်းနိုင်ပါ စေ
2021-07-01 at 7:28 PM
ပြောတာတွေအားလုံးက အမှန်တွေပါပဲ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြပါစို့ 👍
Yi Yi Htwe says:
လေးစား ပါတယ်ရှင် .ဆရာတွေ အားလုံး ဘေးရန်ကင်းပါစေ
Kyi Ma says:
Mu Mu Thinn says:
2021-07-01 at 10:04 PM
Mel Thida says:
2021-07-02 at 12:03 AM
သက်ရှည်ကျန်းမာ၍ ဘေးအန္တရယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးကာ အမြန်ဆုံးစိတ်အေး ချမ်းသာရပါစေ…
Myat Myo Nwe says:
2021-07-02 at 2:24 PM
2021-07-06 at 8:52 AM
ရပါတယ် သိုသော အမေ့